Somaliland Net - Somaliland Net
Sumcadii madaxweyne Riyaale oo Cirka isku shareertay ka dib (1)
Sumcadii madaxweyne Riyaale oo Cirka Isku Shareertay ka dib markii ay soo booqdeen wadanka wafti afrikaan ah isla markaana uu madaxweynuhu ka hadlay aljasiira.
Kadib markii ay Jahmuuriyada Somaliland soo booqdeen gudi katirsan midawga Africa todobaadkii lasoo dhaafay markii ay martiqaad kaheleen madaxweynaha Somaliland mudane dahir rayale kahin mar uu kusugnaa wadanka ethiopia ayaa wax wayn kabadalay shucuurka shacabka somaliland iyo aragtidii ay ka qabeen madaxweyne dahir rayale kahin.
Waftigan oo ahaa mid noociisa ah kii ugu horeeyay ee ay midawga Africa, ay waligood kuyimaadaan Somaliland. Tan iyo intii ay madaxbanaanideeda lasoo noqotay sanadkii 1991kii. waxa ujeedadooda ugu wayn ay kusheegeen bal in ay xog dhab ah kabixiyaan hanaanka dawladnimo iyo dimuquraadiyada kahir gashay Somaliland iyo doonista shacabka Somaliland.
waxay soo kusoo wareegeen gobolada Somaliland intooda badan, waxay soo urursadeen
dareenka shacabka iyo doonista dadwaynaha Somaliland.
Waxay kulamo layeesheen dhamaanba qaybaha bulshada iyo golayaasha qaranka, waxaase xiise gaarka kureebay dhagaha shacabka shirkii uu madaxweynu layeeshay waftiga
isagoo ugu horayn uga mahad celiyay aqbalaada martiqaadkii uu ufidiyay, waxaanu
kuyidhi "waxaan filayaa in aad soo aragteen doonista shacabka somaliland ee ah in
aan goni isutaaga somaliland ahayn wax gorgortan gali kara, ana waxaan idin leeyahay
somaliland 30 sano oo burbur ah ayay kadhaxashay midawgii somalia mana dhici karto
in aanu u xidhnaano qaran aan jirine aqoonsiga aanu xaqa uleenahay ayaan idiinka fadhinaa" hadalkaas madaxweynuhu waxa uu noqday mid kasii dhexqaylinaya dhagaha shacabka somaliland gudo iyo dibadba.
Waftiga africanka ayaa iyana kagaraabay xaqa ay Somaliland leedahay balana qaaday in ay wax bixin dhab ah siin doonaan 53 dal ee uruka midowga afrika. waxa hadana mudo laba cisho gudahood ah laga daawaday talefishanka aljezera waraysi dheer oo uu bixiyay madaxweyne Rayaale, kuna cadeeyay sida ay wadamada carabka iyo Africanku isaga indha tirayaan aqoonsiga Somaliland. hadalkii ugu qiimaha badnaa ayuu kuyidhi madaxweynuhu mar lawaydiiya in ay lamidoobayaan Somalia mar kale " iska daa midaw
dambee soo hadal qaadka midawga ayaaba xaaraan ah" hadalkaas ayaa noqday kii ugu
kululaa oo kasoo yeedha madaxweyne reer somaliland ah, waxayna dadka siyaasada indha indheeyaa kutilmaameen hadalkaas mid u quus gooyay kuwii odhan jiray madaxweyne Rayale daacad kama aha gooni isutaaga Somaliland.
Markii ladaawaday waraysigaas ayay dhamaanba qurba jooga Somaliland u noqotay farxad
iyo rayn rayn aanay baryahan arag, iyagoo isugu hambalyaynayay taageerada uu mudan
yahay madaxweyne rayale in lala garab daagnaado. farxadii ugu badnayd waxay
kadhacday wadanka Qadar ee uu kuyaal talafishanka aljazera oo jaaliyadii Somaliland
ee qadar habeenkaas waxay kutilmaameen mid diwaanka tariikhda u galay shacabka
Somaliland ee kudhaqan wadanka qadar. dadka localka ah ee u dhashay wadanka qadar
ayaa iyana markii ugu horaysay kala ogaaday faraqa u dhexeeya somaliland iyo Somaliya iyagoo waraysiyana layeeshay jaaliyada somaliland ee wadanka qadar, uguna
hambalyeeyay in ay taageeraan madaxweynahooda halganka ugu jira aqoonsiga
Hadaba hadalaas taariikhda galay ee kasoo yeedhay madaxweyne rayaale ayaa waxay kor
uqaadeen taageeradii ay shacabku u hayeen oo mudooyinkan dambe ay qolooyinka
mucaaradka ahi shaki galin jireen sida uu daacad u yahay madaxweyne rayale maadaama
uu yahay nin afgaaban oo aan inta badan waxba kasoo qaadin dacaayadaha ay faafiyaan
xisbiyada mucaafadka ahi. waxayna dadka taageera siyaasada madaxweynuhu
kudhaliileen xisbiyada kucaridka ah kuwo kanaxa talaabooyinka uu madaxweyne rayale
hore u qaado maadaama ay u arkaan qorodhkaas mid iyaga ka goan. arintuse waxay tahay
" waxa hooyada u dan ah ayaa ilmahana udan ah"
Ahmed Ismail Abdi
ahmed abdi" <xaaji810@... Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.